यस वर्ष बरुण हाइड्रोपावरको नाफा ५५ % घट्यो
वैशाख २१, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा बरुण हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले रू. ५२ लाख ७२ हजार खुद नाफा गरेको छ ।
यो नाफा गत वर्षको यसै अवधिसम्म रू. १ करोड १७ लाख १ हजार थियो । गत वर्षभन्दा यसवर्ष कम्पनीको खुद नाफा ५५ प्रतिशत कम भएको हो । यसवर्ष विद्युत् विक्रीबाट हुने आम्दानी ३० प्रतिशत कम भएकाले पनि खुद नाफामा कमि आएको हो ।
गत वर्ष रू. ६ करोड ५५ लाख ८६ हजार विद्युत् विक्रीबाट आम्दानी गरेको कम्पनीले यसवर्ष रू. ४ करोड ५८ लाख २२ हजार मात्र आम्दानी गरेको छ । यसवर्ष प्रसारण लाइनका कारण आयोजनाप पुर्ण क्षमतामा चल्न नपाएकाले आम्दानीमा कमि आएको कम्पनीको भनाइ छ ।
५ प्रतिशत बोनस शेयर मार्फत चुक्तापूँजी बढाएर रू. २६ करोड ७९ लाख ७ हजार पुर्‍याएको कम्पनीको जगेडा कोष रकम भने ३१ प्रतिशत घटेको छ । गत वर्ष रू. १ करोड १७ लाख १ हजार रहेको जगेडा कोष रकम यस वर्ष रू. ८० लाख ६६ हजारमा सिमित भएको छ ।
बैंकबाट लिएको ऋण रकम भने यसवर्ष १५ प्रतिशत घटेको छ । कम्पनीको ऋण रकम गत वर्षसम्म रू. २६ करोड ९६ लाख रहेकोमा यसवर्ष रू. २२ करोड ८५ लाख २५ हजारमा झरेको छ । यस अवधिसम्म कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ४ दशमलव शून्य २ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १०३ दशमलव शून्य १ रहेको छ ।